Kufungisisa kunogona kubatsira kune vese vanhu vanogona kusangana nekushushikana, kushushikana, uye zvimwe zvirwere zvepfungwa kana zvepanyama. Zvinogona kureva zvinhu zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Kufungisisa kunofungidzirwa mhando yepfungwa-yemuviri chiitiko. Kufungisisa kunogona kuitwa pasina rubatsiro uye hazvidi kuchinjiswa neimwe nzira. Zviri pasi rose.
Kufungisisa kunokutendera iwe kuvaka ruzivo uye kutsungirira kwekutarisa kwako izvo zvinobatsira zvinhu zvakawanda zve upenyu. Zvinogona natsa kurara unhu, kuwedzera hukama kugutsikana, kudzikira kushushikana uye zviratidzo zvekushushikana.
Kushungurudzika ndechimwe chezvikonzero zvakajairika vanhu vanoedza kufungisisa. Migumisiro yekushushikana inosanganisira kukanganisa kurara, kukurudzira kushushikana uye kushushikana, kuwedzerwa kweropa uye zvinogona kukonzera kuneta uye kufunga kwakajeka. Kuzvidya mwoyo ndechimwe chikonzero chakajairika chekutanga kufungisisa.
Kugara kupindirana kunogona kubatsira kudzikisira kushushikana uye zvine chekuita nekushushikana zvine chekuita nehutano hwepfungwa.
Mumwe muenzaniso wekufungisisa kuita kufunga. Izvi zvinokurudzira kutarisisa kutarisisa uye kudzidziswa kwekuziva. Inogona kuve nemhedzisiro pane hutano hwepfungwa uye hwenyama. Kungwarira kunogona kukudzidzisa maitiro ekuziva zviri kuitika mune ino. Yakave yakaratidzirwa kuve ine hutano uye inoshanda nzira yekugadzirisa kushushikana kwezuva nezuva kunokanganisa mufaro wako wese.
Kufungisisa kwechiBuddha mumwe muenzaniso. Yayo inonyanya kukosha fomu inotarisa pakuteerera kune iyo nzira yaunofema. Tanga nekugara wakatwasuka musana wako wakamira. Bata musoro wako wakamira asi kwete kuomarara. Unogona kuvhara maziso ako, kutarisa pasi pamaoko ako, kana kutotarisa pane imwe tsoka tsoka pamberi pako. Kana iwe uchinzwa iwe pachako uchikotsira, vhura maziso ako.
Paunotanga kufungisisa, chengeta kuverenga kwekufema kwako paunenge uchifema kusvika gumi. Kana uchinge wasvika gumi, tanga pamusoro pa10. Kufema kunononoka uye nguva dzose, kwete kumanikidzwa kana kwekunyepedzera. Kuziva zvizere kufema kwako kunogona batsira kuvandudza kuziva kwako uye kutora kutonga panguva dzekunetseka uye kushushikana.
Kana iwe ukazviwana uchinge wavhiringidzwa nemafungiro ako kana zvakakukomberedza, saka unofanira kuzvitenda asi usazvinamatira. Izvi zvinokurudzira kuzviziva uye kunowedzera kudzora kwekutarisa.
Kune zvakawanda zviwanikwa uye mavhidhiyo pamhepo izvo zvinogona kukubatsira iwe kudzidza kufema uye kufungisisa nzira, zvimwe zvakanyatsogadzirirwa wiricheya vashandisi. Dzimwe nzira nemaitiro zvinogona kuda kugadziriswa asi vanhu vari mu mavhiripu unogona kuwana zvinobatsira yekufungisisa.